Fikradda dhirta dhirta loo yaqaan 'Lotus Flower Tattoo' ee gabdhaha
Fikradda dhirta dhirta loo yaqaan "Lotus Flower"
1. Lotus Flower tattoo lafta jilicsan waxay keenaysaa muuqaal wanaagsan
Gabdhaha waxay jecel yihiin quruxda quruxda badan ee ubaxa lafaha. Naqshadeynta tattoo waxay ku siinaysaa muuqaal wanaagsan.
2. Lotus Tattoo ubax ah on dharku wuxuu sameeyaa gabadh muuqata soo jiidasho leh
Gabdhuhu waxay jecel yihiin dharbaaxada dhirta ubaxa ee dharkooda; Naqshadeynta tattoo waxay u muuqataa inay u muuqdaan kuwo shucaac ah
3. Lotus Flower tattoo dhinaca samee gabadh u muuqata mid qabow
Gabdhuhu waxay jecel yihiin in lakabka xawaashka ubaxa dhoobo ee dhinaca; naqshadeynta tattoo waxay u egtahay inay u egtahay muuqaal cajiib ah
4. Lotus Flower tattoo on bowdada wuxuu siinayaa gabdhaha muuqaal soo jiidasho leh
Gabdhaha, gaar ahaan xirashada gaaban iyo gaaban gaaban oo gaaban waxay u tegi doonaan xayawaanka ubaxa dhirta iyaga oo bowdooda u ah si ay uga dhigaan kuwo soo jiidasho leh ragga
5. Lotus Flower tattoo laabta samee gabadh muuqata
Gabdhaha leh maqaarka jidhka ee madow iyo timaha madow waxay jecel yihiin Lotus Flower Tattoo on laabta sare; naqshadeynta tattoo waxay ka dhigeysaa inay u muuqdaan kuwo xiisa leh oo qurxoon
6. Lotus Flower tattoo xagga danbe waxay keeneysaa muuqaal la jecel yahay
Gabdhuhu waxay gashadaan jilbaha-jilicsan jacaylka si ay u helaan dharka ubaxa dhoobada ubaxa. Tani waxay ka dhigeysaa kuwo soo jiidasho leh
7. Waxay ka dhigan tahay ubaxa macaanka ah tattoo on cagta si uu u dhiso
Gabdhuhu waxay sameeyaan dharka ubaxa dhuudhuuban lugaha si ay u muujiyaan lugahooda waxayna ka dhigaan dhibic soo jiidasho leh
8. Tani waxay u egtahay dharka ubaxa dhirta ubaxa dhejinta si ay gabdhuhu u eegaan jajabyo badan
Gabdhaha leh jidhka iftiinka maqaarka ayaa u socon doona qeylada dhirta ubaxa dhaadheer ee ubaxa, qoorta gadaasheeda, si ay uga dhigaan inay u eegaan sharaxaad dheeraad ah
9. Lotus Tartoo ubaxa ah ee dhinaca bowdada ayaa keena muuqaalka dumarka
Gabdhaha waxay jecel yihiin quruxda quruxda badan ee dhirta ubaxa. Naqshadeynta tattoo waa mid soo jiidasho leh.
10. Lotus Tartoo ubax ah ee gadaashiisa wuxuu keenaa muuqaal la jecel yahay
Dumarka Brown waxay geliyaan duufaantu waxay jecel yihiin lafa ubaxa dhirta dhabarka; naqshadeynta tattoo waxay u egtahay inay u muuqdaan kuwo xiiso leh oo qurux badan
11. The Lotus Flower Tattoo on dhinaca bowdada ka dhigayaa gabdhaha leeyihiin muuqaal la yaab leh
Mudanayaalku waxay jecel yihiin Lotus Flower Tattoo ee dhinaca bowdada si ay u bixiyaan muuqaalkooda cajiib ah.
12. Gabdhaha waxay u baxaan dhirbaaxa ubaxa ah ee ubaxa ah ee gadaashooda si ay u eegaan muuqaalkooda.
Gabdhaha dharka gaaban ee dharka leh waxay jecelyihiin inay u tagaan dharka ubaxa ee ubaxa iyagoo gadaashooda si ay u helaan dareenka dadka kale oo ay siiyaan muuqaal soo jiidasho leh.
Tags:Tartoo ubax badan sawirada gabdhaha
gadaal u laabotattoo maroodigacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahTartoo ubax badanJoomatari Tattoostattoos qabaa'ilkataraagada kubbaddaarrow Tattoosawir gacmeedtattoos ubaxlibto libaaxTattoo FeatherlammaanahaTattoos WadnahaTattoo infinitytattoo dheemangaraacista gacmahaDhaqdhaqaaqatattoo ah octopusshimbir shimbirhenna tattootattoos qorraxdatattoo tilmaanTilmaamta jaalaha ahtattoos taajkiitattoos eagleku dhaji tattoostattoos qoortatattoos gacantasawirada malaa'igtafikradaha tattooshaatiinka shiidantattoo biyo ahtattoos sleevewaxaa la dhajiyay tattoosnaqshadeynta mehndiwaxay jecel yihiin tattooskoi kalluunkajimicsiga bisadahasawirada gabdhahatattoos cagtatattoos iskutallaabtamuusikada muusikadatattoos saaxiib saxa ahsawirrada raggatattoo indhahalaabto laabtatattoos qosol lehtattoostattoos moon